Home Wararka Dagaal beeleed khasaare gaystay oo ka soo cusboonaaday Gobolka Galgaduud
Dagaal beeleed khasaare gaystay oo ka soo cusboonaaday Gobolka Galgaduud
Dagaal culus ayaa haatan ka bilowday deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud. Dagaalka ayaa u dhaxeeya laba maleeshiyo beleed kuwaas oo ka soo kala jeeda magaaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaad ka soo jeeda cadaado ay qof shacab ah ay ku dileen saacado ka hor deegaanka Xananbuure. Xaalada ayaa ah mid haatan kacsan waxana la maqlayaa Rasaas aad u culus. Deegaanka Xananbuure waxaa horay kaga dhacay Dagaal labadaan Beel u dhaxeeya.